जाडो खेल | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: शीतकालीन खेलहरू
कता कता कता कता?
स्नोबोर्डरहरू !!! कसले बटालियन बोर्डमा सवार भयो ??? तपाईंको प्रभाव ??? बटालियन बोर्डको सवारी पछि, मलाई कुनै बुर्टन चलाउने जस्तो लाग्दिन। म ating औं बर्ष स्केटि been गर्दै छु। कुन मोडेलमा? मसँग परिचित छु ...
"स्की हिड्ने को अमूर्त प्रकारहरू" आवश्यक छ
उच्च र्याकमा "खाली स्की वाकि of को प्रकारहरू" आवश्यक छ। वंशको गति कम गर्न प्रयोग गरियो। आधारभूत सिद्धान्त: खुट्टा जोड्ने मा अलि झुकाइएको छ, शरीर सीधा राखिएको छ। सही स्कीइ depends निर्भर गर्दछ ...
सबै प्रकारको शीतकालीन खेलहरू लेख्नुहोस्
सबै प्रकारका जाडोका खेलहरू लेख्नुहोस् ...। हिउँ खेलकूद * बायाथ्लोन * फ्रिस्टाइल * अल्पाइन स्कीइ * * क्रस-कन्ट्री स्कीइ * * नॉर्डिक संयुक्त * स्की जम्पिंग * ...
स्की कसरी छनौट गर्ने?
स्की कसरी छनौट गर्ने? यदि स्कीहरू स्केटका लागि हुन् भने प्रसिद्ध ब्रान्डहरू फिशर, म्याडचस आणविक, रसिग्नोल खरीद गर्नुहोस्! (लगभग एक मूल्य को लागी, यदि तपाईं एक प्रो हुनुहुन्छ, तब सस्तो व्यावसायिक स्की लागत 8500 XNUMX०० (फिशर)) ...
skis Rossignol Zymax स्केटिङ वा परमाणु प्रो स्केट? उनमें से कौन सा हिमपात को तापमान और हालत के बारे में कम picky है?
Rossignol Zymax स्केटिंग वा आणविक प्रो स्केट? कुन हिउँको तापक्रम र अवस्थाको बारेमा कम पिक्की हो? मलाई लाग्छ कि यो राम्रो छ2एक अंजीर लिन! तर म आणविक हुनेछु ...
TISA skis - कसको ब्रान्ड?
TISA skis - कसको ब्रान्ड? नोवास्पोर्ट कम्पनी। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस मेरो राय मा युक्रेन। जे होस्, म गलत नै छु। निश्चित रूपमा युक्रेनीको संयुक्त लगानी "फिशर-मुकाचेभो" युक्रेनमा स्की उत्पादन गर्ने एक मात्र कम्पनी हो। संयुक्त उद्यमले यसको लागि स्की उत्पादन गर्दछ ...
स्नोबोर्ड कपडाको कुन फर्म राम्रो मूल्य र गुणस्तरको हो? र जसमा तपाईं स्टोर पाउन सक्नुहुनेछ?
कुन ब्रान्डको स्नोबोर्ड कपडा सबै भन्दा राम्रो मूल्य र गुणस्तर हो? र कुन भण्डारमा तपाईं यो पाउन सक्नुहुन्छ? Quiksilver - http://shop.quiksilver.ru/ Burton - http://www.burton4u.ru Bonfire र LMA http://www.tema-sport.ru त्यहाँ छ ...
उच्च वृद्धि गायकहरू, रूसको ताराहरू। नामहरू?
लामो गायकहरू, रसियाका तारा। नामहरू? दिमित्री गुर्नेभ। कार्प उदोडोभ पोलीप पोर्फोरोभ भने, रूसी टेनिस प्लेयर मारिया शारापोभा महिलाको बीचमा विश्वकै उच्च ताराको रेटिंगमा शीर्ष स्थानमा छिन्। मेरीको उचाई १187 सेन्टिमिटर छ, ...
एक रिज दौडको लागि, NNN वा SNS माउन्ट गर्नुहुन्छ? र किन त्यस्तो छनौट? कृपया व्याख्या गर्नुहोस्! अग्रिम जवाफ दिँदै धन्यवाद!
स्केटिंग को लागी, एक NNN वा SNS माउन्ट? र किन यस्तो छनौट? कृपया वर्णन गर्नुहोस्! अग्रिम जवाफ दिएकाहरूलाई धन्यवाद! सलोमोन पाइलटहरू (दुबै बुट र क्रेपहरू) -SNS NNN अनुरूप छन् NIS प्लेट मुनिको माउन्टमा यदि ...
सिल्म फिसिङ गर्ने सबै मौसम SWIX F4 प्रिमियम स्प्रे कुन कुरामा ब्रोयले तल कडा बर्फमा रोल गर्दैन - 10? more +
सबै मौसम स्लाइडिंग मलहम SWIX F4 प्रीमियम स्प्रे कस्तो ब्वाई -११ तल कडा हिउँमा सबै रोल हुँदैन? अधिक + अन्तमा यो केहि दायरामा जान्छ, तर मँ सम्झाउँदिन ...
फिगर स्केटिङमा कुन प्रकारको जम्पहरू छन् र तिनीहरूले कसरी एकअर्काबाट भिन्न हुन्छन्?
फिगर स्केटिंगमा कुन प्रकारका जम्पहरू छन् र ती कसरी एक अर्काबाट भिन्न छन्? http://fskating.erlang.com.ru/lexicon.html भेडका छाला कोट, साल्चो, रिटबर्गर, फ्लिप, लुत्ज र एक्सेल टुलु # 769 XNUMX;; एन (अ to्ग्रेजी औंला लूप) एक साधारण जम्पहरू मध्ये एक ...
स्केट्स मा फिर्ता सवारी कसरि सिक्न ??
कसरी पछाडि स्केट सिक्न? बाधा, बेन्च वा भित्ताहरूले सुसज्जित आइस रिinkकमा रिभर्समा सवारी गर्न सिक्नु राम्रो हो। र रि on्कमा धेरै नहुँदा पनि समय छनौट गर्नुहोस्।
स्नोबोर्ड - ट्विन्टिप VS दिशात्मक
स्नोडबोर्ड - ट्विन्टिप VS दिशात्मक दिशात्मक एक स्नोबोर्ड हो जो एडी भन्दा ठूलो नाकको साथ छ। ट्विन टिप - औंला र हिल समान अनुपातहरू छन्। -० को दशकको मध्यमा, यो बन्यो ...
भविष्यको लागि उत्प्रेरित। र एलेना Rodionova को हो?
भविष्यमा भ्रमण। र एलेना रोडिओनोभा को हो? Radionova एलेना Igorevna रूसी राष्ट्रिय टीम २०१२/१ Moscow मस्को टोली २०१२/१ birth जन्म मिति: जनवरी,, १ 2012 13 2012 (मस्को) उचाई: १13 सेमी क्लब: खेलकूद स्कूल CSKA (मस्को) ...
कृपया स्किन्सको छनौटमा सहयोग गर्नुहोस्
कृपया स्कीको छनौटमा मद्दत गर्नुहोस्, कृपया कम्बीको मुख्य विरोधाभास होल्डिंग मलम हो। क्लासिक्स समात्ने मलम बिना, तपाईं जानुहुने छैन - रेकइलले यातना दिनेछ। र यदि तपाइँ होल्डरसँग यसलाई स्मीयर गर्नुहुन्छ भने, यसले घोडालाई हस्तक्षेप गर्दछ। त्यसकारण ...
स्पीड स्केटिङ रिपोर्ट
स्पीड स्केटिंग आइस स्केटि ofको शीर्षकमा एक रिपोर्ट शारीरिक व्यायामको एक प्रकार हो जुन एक व्यक्ति बरफको सतहमा विशेष गरी बनाइएको उपकरणहरूमा हिड्दछ - स्केट्स जुत्तासँग जोडिएको ...।
कुन ब्रान्डको कुन ब्रान्ड उत्तम हो। चेक बोटसको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ?
कुन ब्रान्ड सब भन्दा राम्रो हो। तपाईं चेक BOTAS का बारे के भन्न सक्नुहुन्छ? BOTAS राम्रो स्केट हुन्थ्यो। जे भए पनि, बुटहरू हालको चिनियाँहरू जत्तिकै कठोर थिएनन्। आजका लागि उत्तम ...
कृपया मलाई मलाई स्कीइङ्गको प्रकार बताउनुहोस् !! वा साइट दिनुहोस्! स्कीइङको प्रकार ??
कृपया मलाई स्कीइ of् को प्रकार बताउनुहोस् !! वा साइट दिनुहोस्! स्कीइंगका प्रकारहरू ??? क्रस-कन्ट्री स्कीइ।, बायाथ्लन, डुआथ्लन, जम्पिंग, स्लालोम, फ्रिस्टाइल। रूस २ http://www.high-sport.ru/lyjsport/ उत्तरी खेलहरू: क्रस-कन्ट्री स्कीइing, ओरिएंटरिering, जम्पिंग ...
Björn Dalen र Ole Einar - तिनीहरू एक व्यक्ति वा दुई हो?
Bj Drn Dalen र Ole Einar - तिनीहरू एक व्यक्ति वा दुई हो? यो एक पति र पत्नी हो, ओह, यो एक Norse संत छ! पवित्र Ulechka) महान र भयानक, तर पवित्र! हो, यो सँगै लाग्छ ...
मैले स्किस्बल स्पोर्ट एल एस स्केटिंग, घृणित स्थिरतालाई किन खरिद गर्यो?
एक Sable खेल LS स्केट स्की खरीद, घृणित स्थिरता? यी बजेट स्कीहरू हुन्, कम्तिमा कुनै तरिका तपाईं तिनीहरूलाई सवारी गर्न सक्नुहुनेछ केवल नरम, कुनै न कुनै ट्र्याकमा - हिमपात पछि। स्किहरू रेजको मुनि गलाउँदैनन्, ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,563 प्रश्नहरू।